Kubbaa miilaa Archives - Page 3 of 4 - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Kubbaa miilaa Page 3
Addunyaa ispoortii keessatti, keessumattuu ganda kubbaa miillaatti, oduun oo’ituu tarii mi’ooftuun tibbanaa eenyutu ‘Ballon d'Or’ FIFA bara 2014 injifata kan jedhu. Tarree dheeraan gara...
Taphoota gareelee adda addaa biyyoota Awurooppaa jiddutti ta’een kanneen ni injifatan jechuun eeggaman injifatan, garuu wonti hineeggamne tokko tokko hin uumamne jechuun hindanda’amu. Taphni...
FC Baarseloonaan tapha isaa torbaan kanaa goolii 5 - 1 morkataa isaa garee Siviyyaa qaanfachiise. Tapha kana irratti Li’ooneel Messiin goolii 3, Neymaar 1,...
Taphoota Primer Liigii Ingiliiz guyyaa har’aa garee garagaraa jiddutti ta’een gareen Cheelsii, Manchastar Yunaaytidii fi Manchastar Siitiin injifannoo goonfatan. Gama biraatiin gareen Arsenaal, West...
Yayaa Turee, tapahtaa Manchester Siitii, taphataa Aafrikaa bara kanaa ta’uun muudame. Yaayaa Turee yeroo sadaffaaf wolitti aansee badhaasa kana kan argatte. Bara dabre taphtaan...
Kristiyaanoo Ronaaldoon seenaa isaa keessatti akka amma taphataarutti kubbaa miilaa taphtee ykn itti milkaayee takkaa hinbeeku. Akka ibsa taphataa Riyaal Maadriid kanatti, sadarkaan amma...
Gareen Braazil kufaatii maaltu akka isa irra gaye beektu, yaadattu- namoonni geeba addunyaa bara 2014 duukaa buutan. Geebni dachii isii irratti qopheesite harka isii...